We Say No to Corruption | Speaking Truth Is An Art Form
Halkee ku danbeysay Warshadii Baastada ee Muqdisho.. Yaase laga iibiyay?..
Posted on November 3, 2015 by africorruption
Warshadda Burka iyo Baastada magaalada Muqdisho ee ku magac dheer warshada Baastada waxay ka mid ahay Kaabayaashii Dhaqaalaha dalka ee dowladii Kacaanka ku faani jirtay inay dalka ka hirgelisay si ay qeyb uga noqoto wax soo saarka dalka iyo warshadeynta, waxayna dacalka ku heystay jidka dheer ee Warshadaha oo dhowr warshadood isku xiri jiray sida magaciisa ka muuqatay.
Markii ay dhaceen dagaaladii sokeeye waxay Warshadu ahayd goobihii ugu waaweynaa ee dadku ku qamaameen iyadoo laga helay raashin aad u faro badan oo u badan Qamadigii ay ku shaqeyn jirtay, waxaana markaasi loo geystay burbur xoog leh oo markii danbe ay dadweyne caadi ah guryo ka sameysteen.
Xarunta warshadda oo dhul aad u weyn ku fadhiday qalab baaxad lehna ku rakibnaa waxay kooxihii dalka ku habsaday ka dhigteen meel ay furfurtaan oo xitaa birihii ay ka rarteen, waxaase weli ku dambeeyay calaamado aan go’i karin oo haanta dheer iyo dhismihii shubka ahaa ka mid yahay.
Mar danbe waxay Warshadu xarun u noqoto ciidamo kala duwan oo kuwa dowladda, maxkamadihii, Itoobiyaan iyo Alshabaab isugu jira oo isaga danbeeyay, waxaas oo dhan iyadoo soo martay Warshadii Baastada Muqdisho wuxuu maanta xaalkeedu marayaa in gebi ahaanba la tirtiro oo qeybihii ugu danbeeyay burburin ku socoto kadib markii si aan la shaacin looga iibiyay ganacsato.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda laga iibiyay dhulkii Warshada Baastada, qaarkood ayaa sheegaya in laga iibiyay Bankiga Salam, halka warar kale sheegayaan in laga iibiyay shirkad shisheeye, balse waxaa jirta in dhulkii iyo hantidii qaran ee la oran jiray Warashadii Baastada ay hadda kadib noqoneyso taariikh la soo dhaafay.
Kuwa iibiyay ee xilka dowladnimo ku bixiyay iyo kuwa iibnaday ee hanti qaran ku dhiiraday inay gaar u yeeshaan midkoodna kuma fekerin inaysan sidaas arrintu ku dhammaan doonin oo xisaabtan jiri doono, dibna loo soo celin doono wixii hanti qaran ahaa ee la lunsaday.
Heeshiis hoosaad la ogaaday inuu ka dhacay Dubai oo qarsoodi ah.
WeSayNotCorruption – Dal iib ah oo Baddiisa, hamahiisa batroolka,dhulkiisii ,hantidiisa Dawladda layska iibinaayo ayada oo aan wax Tender ama BID (Qandaraas la naadiyey) loo sameyn taas oo dunidu layaabtay baaxadda musuq maasuqa dalka ka jira. Somaliya masuuliyiin ma joogaan ee waa dad dhac iyo boob u soo shaqo tegay.
Talo dalkaan dadkii laha ma joogaan miya? Wasiir kasto wuxuu leeyahay intaan isbedel dhicin aan wax qabsado (Xaaraan) cid ka hadlayso aysan jirin sabtoo ah waa lawada wasaqaysan yahay.
Waxaa nasiib daro ah in aay samaaysantay silsilad isku xidhan oo samaaystay company aan xitaa si sharciya u ragistar garaaysnaayn, balse la siiyo qandaras kasta oo Wasaarada Warfaafinta Dalxiiska ka soo baxa, arrinkan oo aan aad ugu dhaba galay ayaa waxaa ii cadaatay in dadkan xaq darada ku bahoobay aay badidoodu isku wada bahaysteen sidii loo boobi lahaa hantid ma guurtada ee ay leedahay Dawlada Somaaliyeed qeybta Dalxiiska.
Dadkan dulmiga ku heshiiyay waa dad wadaag ku ah amaba shared ku ah mashruuc kasta oo soo baxa, Raga ugu tunka weeyn waa Wasiirka Warfaafinta Dalxiiska iyo Wasiira Dawlihiisa waa Wasiiro Maareye iyo Beegoos.
Waa caadi inaay bulshadu la yaabto sida qandaraska Hotel Curuba ay u bixiyeen oo ay siiyeen laba nin oo ganacsato degan Dubai mardhawna si sharci dara ah u gatay Dhisma can ahaa oo la oran jiray Koreeja Del Sud Xamarweyne uu lahaa nin Talyaani ah oo reerkiisa ay degan yihiin Dalka Talyaaniga, waxaa yab leh nimanka oo ku andacoonaya inay ka iibsadaan dhismahaas wiil Somaali uu odayga tayaaniga soo korsaday kaas oo lacag aad u hoosaysa laga siiyay oo ay haddana ka dhisteen Shopping Center cusub
Labadaas Nin waxaa la yiraahdaa Shariif Axmed iyo Cabdulahi Cali Adoon waxay soo geliyaan oo ay ka ganacsadaan Burka iyo rashiinka waqtigiisa Dhacay taas oo sababta dad badan ku xanuunsadaan ama dhintaanba sababa la xiriira Raashiinkaas Dhacay,
Dadkan xaq darada ku bahoobay ayaa u badan dad aan haba yaraatee ka xishoonaayn dulmiga aay ka gelayaan ummada Soomaaliyeed haba yaraate waxbana aan ka xishoonaayn ama Dulmi iyo awood ku qaata Mashruuc kasta oo dalka ka soo baxa..
Ulajeedada qoraalkaaygani hadaba waa inaay Dawlada Soomaliyeed joojisaa Qandaraasyada sharci darada ay bixiyeen Wasiir Maareeye iyo Beegoos iyada aanan waxba lagala socodsiinin Wasaarada inteeda kale iyo Agaasimayaasha ku shaqa leh arrimahan Qandaraasyada.
Labadan wasiir oo ku bixiyay Qandraaska Hotel AlCuruba wadanka banaankiisa sida Jabuuti iyo Dubai
Iyaga oo ka qaatay lacag dhan $120000 oo ay bixiyeen Sharif Ahmed iyo Abdulahi Ali Adoon.
Waxaan ka codsanaynaa in HantiDhowrka uu talaabo ka qaado labadaan Wasiir oo Hotel Alcuruba ku bixiyay laaluush iyaga oo siiyay Ganacsato waxyeelo badan gaarsiiyay Ummada Soomaaliyeed.
Sidii reer Berbera idhaha u fureen markii ay arkeen in hamahii Batroolka Dawladda la iibinaayo waa in reer Muqdisho indhaha u furaan oo arrintaan ka dhiidhiyaan.
Ahmed Said Jama
Posted on February 25, 2014 by africorruption
Mrs. Fawzia Y. H. Adam
Somalia’s former Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Mrs. Fawzia Y. H. Adam has strongly denied allegations made by former Somali central bank governor Yusur Abrar who accused Mrs. Adam of putting pressure on her to open an account in Dubai to use it for stealing money, according to a report recently published by Moment Media Ethic
Mrs. Adam, Somalia’s first ever female to hold a top government post, said in a press statement of which Moment Media Ethics obtained a copy, that the graft allegations published by Reuters on her were libelous.
Former Governor of Somali Central Bank Ms. Yusur Abrar – Photo Moment Media Ethics
Ethiopia Ma Iska Ilowday Wixii Dhacay 2007
Posted on February 15, 2014 by africorruption
Ra’iisul Wasaaraha Somaliya oo kormeeray Warshada hubka sameysa ee Itoobiya (Daawo Sawirada)
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa maanta la kulmay Taliyaha Ciidanka Xooga dalka Ethiopia General Samora Muhammad Yunis.
Waxa uu Ra’iiusl Wasaaruhu booqasho ku tagey Warshadda Weyn ee dalka Ethiopia ee lagu magacaabo Metal and Engineering corporation (METEC).
Kulanka uu la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Taliyaha ciidanka xooga dalka Ethiopia ayay ka wada hadlayeen xoojinta amaanka iyo dib u xoraynta goobaha ay wali dalka kaga sugan yihiin kooxaha nabaddiidka ah, waxaana kulankan uu qayb ka yahay 3 maalmood oo Ra’iisul Wasaare Cabdiweli uu booqasho rasmi ah ku joogo magaalada Addis Ababa ee Ethiopia.
Dhanka kale waxaa uu Ra’iisul Wasaare Cabdiweli iyo Wafdigiisu ay booqasho ku tageen mid kamid ah xarumaha ay leedahay warshadda weyn ee dalka Ethiopia ee lagu magacaabo Metal and Engineering corporation (METEC), taasi oo qabata howlo kala duwan oo ay kamid yihiin samaynta qalabka baabuurta, baabuurta ciidanka iyo rasaas.
Sabti, Febaraayo 15, 2014 (Moment Media Ethics) — Guddiga Qaramada Midoobay u qaabilsan la socodka cunno-qabteynta hubka ee Soomaaliya iyo Eratria ayaa ka dalbaday Golaha Ammaanka in si buuxda loogu soo rogay Soomaaliya cunnoi-qabateynta hubka ee sannadkii hore laga qafiifiyay, kaddib markii dhawaan ay soo shaac baxday in dowladda Somalia ay hub kala duwan ka iibisay Al-shabaab.
Guddiga ayaa soo bandhigay dhowr hab oo lagu xakamayn karo hubka galaya Soomaaliya kuna dhacaya gacmaha qaldan, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in lagu soo rogo cunno-qabateynta hubka Soomaaliya si buuxda ama loo helo nidaamyo iyo tallaabooyin adag oo lagu xakamaynayo laguna soconayo cida uu gacanta u galayo hubkaaas.
Dhawaan ayay ahayd markii guddiga dabagalka cunno-qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eratria ay ku eedeeyeen dowladda Xasan Sheekh Maxmuud in hubka ay kasoo gadato dalalka Caalamka ay gacanta u galiso xarakada Al-shabaab, qaarna ku iibiso suuqyada Muqdisho.
Golaha Ammaanka ayaa cunno-qabateynta hubka kusoo rogtay Soomaaliya sannadii 1992-kii si loo joojiyo hubka faraha badan ee galayay Soomaaliya, kuwaasoo gacanta u galayay beelo dagaalamaya.
Lama oga sida Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uga jawaabi doono dalabkan kooxdan uga yimid, iyadoo sidoo kale ay dowladda Soomaaliya beeninayso warbixinta kooxdan ay soo saartay, iyadoo ku tilmaantay in la been abuuray oo aan laga fiirsan.
Golaha Wasiirrada oo la dhaariyay iyo Baarlamaanka oo lasoo xiray
Posted on January 22, 2014 by africorruption
Arbaco, Janaayo 22, 2014 (Moment Media Ethics) — Wasiirarda cusub ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta lagu hordhaariyay baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo dhaarinta ay goobjoogayaal ka ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud, ra’iisul wasaarihiisa C/weli Sheekh Axmed Maxamed iyo guddoomiyaha baarlamaanka, Maxamed Cismaan Jawaari oo kulanka shir-guddoominayay.
Dhaarinta kaddib waxaa kulanka hadal ka jeediyay ra’iisul wasaaraha Somalia isagoo uga mahadceliyay xildhibaannada baarlamaanka sidii ay kalsoonida u siiyeen xukuumaddiisa shalay oo Talaado ahayd, isagoo ballan-qaaday inay wadashaqeyn wanaagsan la yeelan doonaan baarlamaanka.
Madaxweynaha oo aqbalay soo jeedintii Golaha
Posted on January 18, 2014 by africorruption
Madaxweynaha oo aqbalay soo jeedintii Golaha…
January 17, 2014 | Filed under: Warka Maanta | Posted by: QOL Admin
Madaxweynaha oo aqbalay soo jeedintii Golaha Wasiirada kuna baaqay in horumarka iyo isbedelka la sii dar-dargeliyo.
Muqdisho, 16 January 2014 – Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa manta aqbalay soo jeedintii Ra’iisul Wasaaraha ee Golaha Wasiirada cusub oo ka kooban shaqsiyaad khibrad iyo waayo aragnimo leh.
“Waxaan aqbalay Ra’iisul Wasaaraha soo jeedintiisii ee Golaha Wasiirada cusub ee uu soo xulay oo matala dhammaan gobolada dalka. Golahan Wasiiradu waxey heystaan kalsoonideyda. Golahan Wsiirada waxaa sugaya howl aad u culus oo looga baahanyahay inay dhameystiraan dib-u-habeynta iyo dib u dhiska uu dalku u baahanyahay.
Ra’iisul Wassare Abdiweli Sheikh Ahmed Mohamed waxuu heystaa taageeradeyda buuxda, waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u xaqiijinayaa inaan ognahay howlaha culus ee na horyaalla. Waxaana idiin caddeyneynaa sida ay nooga go’antahay isbedel dhab ah oo muuqda, isla markaana la dareemi karo, shacabkuna ay aamini karaan.”
Waxaan rumeysannahay in Xukuumaddan cusub ay horyaalaan caqabado fara badan. Waxaana u baahanahay in xasilinta iyo amniga la sii dar-dargeliyo, la horumariyo adeegyada bulshada, dar-dar gelin lagu sameeyo maamulka iyo maareynta maaliyada, iyo sidii dib u dhiska dalka looga shaqeyn lahaa.
Waxaan ka codsanayaa Baarlamaanka inay waajibaadkooda dastuuriga ah ka gutaan oo ay ansixiyaan, si Xukuumaddu ay u dar-dar geliso qorshaha siyaasadda, amniga, dib u habeynta maaliyadda iyo adeegyada bulshada, oo muhiim u ah xasilinta iyo horumarka Soomaaliya.
Olole Xoogan oo ka dhan ah Xukuumada Cusub uu soo dhisay Ra’izul Wasaaraha oo kasocda Magaalada Muqdisho
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Magaalada Muqdisho waxa ay kawadaan abaabul xoogan oo ay kudoonayaan in Codka Kalsoonida ugu diidaan Xukuumada Cusub uu Habeen hore soo dhisay Ra’izul Wasaare Saacid.
Qaar kamid ah Hoteelada Magaalada Muqdisho waxaa kasocda abaabul iyo is uruursi ay wadaan Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu kasoo horjeeda Xukuumada Cusub ee lasoo dhisay.
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka ee wada ololaha ka dhanka ah Xukuumada Cusub ayaa iyagu sheegaya in aysan maranab aqbali dooin codka Kalsoonidana u diidi doonaan Xukuumada uu soo dhisay Ra’izul Wasaare Cabdi Wali Sheekh.
Qaar badan oo kamid ah Xildhibaanada kasoo horjeeda Xukuumada Cusub ayaa tilmaamay waxyaabaha ay ku diidan yihiin in ay tahay in Golaha Wasiirada lagu soo daray xubno ay horey uga digeen in Xukuumada lagu soo daro oo katirsanaa Xukuumadii Ra’izul Wasaare Saacid.
Xildhibaanada Mucaaradka ah waxaa kusoo biiray Xildhibaano Cusub oo iyagu saluugsan Wasiirada lagu dhawaaqay Habeen hore iyo Xubno kale oo iyana horey loogu balan qaaday in Wasiiro laga dhigayo balse la iska ilaaway.
Ra’izul Wasaaraha iyo Xukuumadiisa ayaa hada waxaa heesta Wal wal cusub oo ku aadan qaabkii ay ku heli lahaayeen Kalsoonida Baarlamaanka Soomaaliya , waxaana xaalka uga sii daray markii ay is casileen labo kamid ah Wasiiradii la Magaacay halka kuwa kalana laga cabsi qabo in ay is casilaan.
Xafiiska Shabakada Moment Media Group
Khilaafka Labada Gabdhood – Burburka Dowladda Xasan Sheikh
Posted on January 14, 2014 by africorruption
Tuesday 14 January 2014 – Daacad Wadanka, Moment Media Ethics Online – Inta aanan u galin Burburka Dowladda Xasan Sheikh iyo meesha hada xaalku marayo, waxan rabaa inaan gadaal u laabto oo idin xasuusiyo Qoraaladeenii hore ee aan ku sheegnay Khilaafkii Madaxweyne Xasan Shiikh iyo Saacid.
Khilaafkaas oo ka bilowday is-fahanwaa dhex maray Labada Gabdhood ee Saaxiibada ahaan jiray Xildhibaanad Caasho Xaaji Cilmi iyo Wasiirad Fowsiyo Yusuf Xaaji Aadan.
Caasho Xaaji ayaa Madaxda Dowladda u keentay inay ka dhigaan Wasiirka Arimaha Dibadda Saaxiibteed Fowsiyo Yusuf, taasoo si fudud ay ku aqbaleen Ra’isal Wasaare Saacid iyo Madaxweyne Xasan Shiikh iyagoo ka fiiriyay dhowr waji, sida inay kasoo jeedo beelaha Waqooyi, iyo in wadamada Reer Galbeedku ay ku farxi doonaan in haweeney looga dhiibay wadan Islaam ah Jago sidas u weyn.
Sidii la filayay Fowsiyo magacaabisteeda waxay noqotay mid bulaasha, waxayna ku soo aaday waqti beesha Caalamku ay go’aansatay in Soomaaliya la aqoonsado.
Siyaasadda Arimaha Dibadda Soomaaliya waxay noqotay waxqabadka ugu wanaagsan ee ay ku faanto Dowladda Soomaaliya, magacii Fowsiyana cirka ayuu isku shareeray, hadaba, qof bilaabayba Labadii gabdhood waa is-qoonsadeen waana is Khilaafeen.
Ra’isal Wasaare “Saacid” oo si fiican uga talo qaata Marwadiisa Caasho Xaaji wuxu bilaabay in mar walba oo ay Wasiirad Fowsiya la tashato ama usoo bandhigto qorshe-howleedkeeda uu yiraahdo “Saaxiibtaa Caasho mala soo tashatay?! – Ama ma usoo sheegtay arinkaan?!” – Taasoo ka cereysiisay Fowsiyo Yusuf, oo kadibna u dacwootay Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud, halkii uu dhexdhexaadin lahaa, madaxweyne Xasan wuxu u sheegay wasiirad Fowsiyo inay hada ka dib isaga kala tashato howl-maalmeed keeda, ayna iska deyso dhinaca Ra’isal Wasaare Saacid iyo Marwadiisa.
Si wanaagsan ayay iskula jaan-qaadeen Madaxweyne Xasan iyo Wasiirad Fowsiyo, safaro badan ayayna dibada u wada aadeen labadoodu. Xanaaqii iyo murugadii waxay ku wareegtay dhankii Xildhibaan Caasho iyo Ra’isal Wasaare Saacid oo u adkeysan waayay in Wasiirad Fowsiyo ay gacantooda ka baxday, kana talo qaadato Madaxweyne Xasan Shiikh.
“Meeshaas waxaa la dhihi karaa Madaxweynaha wuxuu la wareegay Shaqadii Raisul Wasaaraha, Raisul Wasaarahana ma laheyn Awood uu ku difaacdo Xafiiskiisa” Ayuu yiri Sarkaal lasoo shaqeeyay Madaxweynaha iyo Raisul Wasaare Saacid, oo aan Arintaan kala hadalnay.
Sida aan Qoraaladeenii bishii hore ku sheegnay Xildhibaan Caasho Xaaji Cilmi waxay kulamo la qaadatay Xildhibaanada beelaha Isaaq oo ay u bandhigtay sida Wasiiradii ay iyadu keentay ay ugu abaal-guday iyada iyo seygeeda Ra’isal Wasaare Saacid. Kulamadaas wax natiijo ahi kama soo bixin, Wasiirad Fowsiyana waxay dhagaha ka fureysatay Ra’isal Wasaare Saacid iyo Xil. Caasho, taasoo gaartay heer aysan Fowsiyo kasoo qeyb galin Shirarka Golaha Wasiirada oo Khamiis walba lagu qaban jiray xafiiska Ra’isal Wasaaraha.
Marka ay talo faraha ka baxday, ayna adkeysan waayeen Ra’isal Wasaare Saacid iyo Marwo Caasho Xaaji Cilmi, waxay go’aan ku gaareen inay isku-shaandheyn ku sameeyaan Golaha Wasiirada kana reebaan Marwo Fowsiyo Yusuf X. Adan iyo saaxiibada kale ee Madaxweyne Xasan Shiikh, waana talaabadii ay ka dhalatay in xilka laga qaado Ra’isal Wasaare Saacid.
“Aan ka Aarsano” miyee gaartay?
Waatan Soomaalidu ku maahmaado “Rag ciil, cadaab buu ka doortay” – Mudane Saacid iyo Marwo Caasho, wali ma sabrin, waxayna go’aansadeen inay la haraan Marwo Fowsiyo Yusuf Xaji Adan oo ay marto wadadii la marsiiyay Ra’isal Wasaare Saacid.
Nasiibwanaag waxa usoo gacan gashay fursad qaali ah, waxaana Ra’isal Wasaare cusub laga dhigay Nin ay qaraabo iyo Saaxiibo dhow yihiin Saacid, oo ah C/wali Shiikh Axmed. Labadan mas’uul ayaa Saaxiibo ahaa mudo ka badan 40 Sanno waxayna waxbarashadooda ku wada dhameysteen Jaamacadii Umadda, kadibna waxay shaqooyin sarsare ka heleen dowladii adeerkood Max’ed Siyaad Barre.
Waxaa laga dhaadhiciyay Ra’isal Wasaare Cabdiwali inuu ka reebo Wasiiradiisa Marwo Fowsiyo Yusuf, wuxuuse kula taliyay in marka hore ay cod aqlabiyad ah ka keenaan xubnaha Xildhibaanada beelaha Isaaq ugu jira Baarlamaanka.
Marwo Caasho Xaaji ayaa dhabarka u ridatay mas’uuliyadaas, waxayna casumaad u sameysay dhamaan Xildhibaanadii beelaha Isaaq, halkaasoo ay ugu qeybisay qofkiiba $3.000 (Saddex Kun oo Dollar), sidee Media Online u xaqiijiyeen Xildhibaanno, ayna kasoo qortay Qoraal ay ku diidayaan in mar kale Qasiir laga dhigo Marwo Fowsiyo Yusuf X. Adan. Sidaasna wuxu Ra’isal Wasaare C/wali Sh. Axmed ugu badalay booskii Fowsiyo Nin lagu magacaabo Yusuf Ibraahim Kaahin.
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamud ayaa arinkaas diidmo ka muujiyay, waxaana baaritaan dheer kadib Maalintii Shalay aheyd la ogaaday Qorshaha ay iska kaashadeen Ra’isal Waraayaal Saacid, C/wali iyo Xil. Caasho Xaaji.
Waxa nasoo gaaray in Xildhibaanadii Beelaha Isaaq ay kulan raali galin ah la qaateen Marwo Fowsiyo Yusuf Xaaji Aadan kana cudurdaarteen talaabada ay qaadeen. Kulankaana wuxu hub cusub u noqday Madaxweyne Xasan Shiikh oo Dagaal kula jira Ra’isal Wasaaraha cusub ee aan wali shaqo-bilaabin, waxayna kulamo hoose ka leeyihiin sidii dib loogu soo celin lahaa Marwo Fowsiyo Yusuf X. Aadan.
Madaxweyne Xasan Sh. oo ku Socda Wadadii C/llahi Yusuf (AUN)
Lakin gaashaan-buurta kasoo horjeeda Madaxweyne Xasan Shiikh iyo saaxibadiis ee ay hogaaminayaan Ra’isal Wasaare C/wali, Saacid iyo Caasho Xaaji waxay soo dhaqaajiyeen Moshin cusub oo ay baarlamaanka ku horkeenayaan qorshe lagu diidayo in Wasiirada cusub lagu soo daro Wasiiradii hore ee dowladii Ra’isal Wasaare Saacid.
Qorshahaan oo aan la ogeyn sida uu u hirgali karo ama sharciyad uu u leeyahay ayaa wuxu cadeyn u yahay burbur iyo kala tag ay wajiga saartay dowladii loo han-weynaa, waxaana muuqata in Madaxweyne Xasan Shiikh uu durbadiiba ka shalaayay magacaabista Ra’isal Wasaare C/wali Sh. Axmed.
Dadka u kuurgala Siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud uu ku socdo wadadii Madaxweyne Cabdullahi Yusuf oo inta uu iska ceyriyay Ra’isal Wasaare daacad u ah (Cali Maxamed Geedi) keensaday Ra’isal Wasaarihii kursiga ka tuuray (Nuur Xasan Xuseen Cadde).
Sida Arimuhu u socdaan iyo talaabooyinka uu qaadayo Madaxweyne Xasan Shiikh waxay ka turjumeysaa Khibrad yaridiisa Siyaasadeed iyo Latalin-tiisa liidata oo uu ku aaminay Dhalinyaro ku cusub Saaxada Siyaasadda Soomaaliya oo ay markii ugu horeysay kusoo biireen muddo Sannad aan ka badneyn.
Cali Khaliif” Xasan Shiikh waxa uu ka daran yahay Maxamed Siyaad balse ciidan xoogan ma leh uu Dalka ku Qabsado”
Cali Khaliif Galeyr Ra’izul Wasaarhii hore ee Soomaaliya hadana ah Xildhibaan katirsan Baarlamaanka oo kana mid ah kuwa lagu tiriyo inay siyaasadoodu ka fog tahay madaxtooyada Soomaaliya ayaa saaka weerar kale ku qaaday habdhanka madaxweynaha Soomaaliya ee dhanka hogaaminta dalka.
Cali Khaliif Galeyr ayaa sheegay in Xasan Shiikh uu ka sii daran yahay go’aamadiisa iyo xukun isku ururintiisa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Bare, taasi oo ka dhigeysa in dowladnimada ay dhaqaaqi weyso.
” Xasan Shiikh waxaan ku tilmaami karaa inuu ka daran yahay Maxamed Siyaad Barre, balse waxa kaliya oo ay ku kala duwan yihiin waa inuusan ciidankii xooga badnaa heysan” ayuu yiri Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr.
Madaxweynaha Soomaaliya ayuu ku eedeeyey inuu magacaabista wasiirada ku hayo farogelin weyn oo baalmarsan sharciga dalka u yaal, isagoona si gaar ah uga hadlay inuu wado wasiiro markii horeynba iyaga xukuumadii ay ku jireen u riday inay fashilmeyn.
”Xukuumadda cusub waxa ay ka dhismi ladahay waa Madaxweynaha oo raba inuu soo celiyo wasiiro horey u sheegtay inay xukuumadoodii fashilantay, haddana raba in xukuumada cusub soo galaan, taasi oo yaabkeeda leh ayaa haddana waxaa muuqata in awooda magacaabista mas’uulkii lahaa loo deyn oo lagu heysto” ayuu yiri Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr.
Hadalka Cali Khaliif waxaa uu imaanaya xilli maalinta bari ah loo ballansan yahay motion horyaala baarlamaanka kaasi oo laga keenay wasiiradii xukuumaddii Saacid Farax ka tirsanaa oo haddana raba inay soo noqdaan.
Guddoomiye Jawaari oo loo gudbiyey mooshin ka dhan in dib loo soo celiyo wasiiradii Saacid
Posted on January 12, 2014 by africorruption
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxa ay kaga doodayaan mooshin ku saabsan in golaha Wasiirada cusub aan lagu soo dari karin xubin ka mid ah Xukuumaddii ay baarlamaanka kalsoonida kala laabteen.
Fadhiga maanta oo uu shir guddoominayo Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari islamarkaana ajandaha kulanka uu ahaa meel marinta hindise sharciyeedka hay’adda daraasaadka badaha iyo Shintiriska ay baarlamaanku ku shaqeynayaan sanadkan cusub, ayaa mudanayaal ka tisan baarlamaanka waxa ay guddoonka u soo gudbiyeen mooshin ku saabsan in xubin ka mid ah Golahii Wasiirada ee ay baarlamaanku kalsoonida kala laabtay aan lagu soo darin golaha Wasiirada cusub ee uu soo dhisayo R/wasaaraha dalka C/weli Sheekh Axmed Maxamed.
Xildhibaannada soo saxiixay mooshinkan ayaa baarlaamanka ka codsaday in laga dooddo mooshinkan, maadaama uu yahay mid xaasaasi ah oo u baahan in mudanayaashu ay aragtidooda ka dhiibtaan, waxayna xildhibaanada soo gudbiyay mooshinkan ay u cuskadeen in aysan xiligan habooneyn in Golaha Wasiirada cusub lagu soo darro Xukuumaddii kalsoonidii laga laabtay oo ay kusheegeen in xubno ka tirsanaa Xukuumadaasi ay wax ka saxiixeen mooshinkii kalsoonida lagala noqday.
Mudanayaal kale oo aragtiyo ka duwan qaba doodda mooshinkan ayaa sheegay in muwaadinku uu xaq u leeyahay in markale la soo doorto oo xil loo dhiibo, taasi oo ay ku sheegeen in mooshinkaan uu ka hor istaagayo in mudanaha markale la soo dooran lahaa in uu sidaan xil ku waaayo, waxayna ku tilmaameen in ay tahay mid aan habooneyn.
just Say NO Corruption
Somalia: The Consequences of Political Infighting
Latest Corruptions in Somalia: President H.E. Hassan Sheikh Mohamed ordered the Somali Prime Minister H.E. Farah Shirdon to resign urgently.
Kenyan government launch anti-corruption website
Dr. Abdusalam Omer
HORN OF AFRICA British business’s new frontier
British Prime Minister David Cameron’s reason for holding an international conference on Somalia in London on 7 May, along with an associated business forum the following day, was not only so he could claim success in diplomacy. He mainly wanted to pave the way for his country’s companies to be well placed to win the future reconstruction contracts, and so not leave the field open to the Turkish companies that are already very active in the Horn of Africa (ION 1351). (...)